ỤDỊ ỤDỊ MAKA AUTOCAD - AUTOCAD - 2019
Otu esi tinye ụdị ntinye na AutoCAD
N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ọrụ kwesịrị ịtọ aha ụdị RAM nke ejikọrọ na kọmputa ha. Chọpụta otu esi achọpụta na ịme ihe na ihe nlereanya nke ebe nchekwa na Windows 7.
Hụkwa: Otu esi achọpụta ihe nlereanya nke motherboard na Windows 7
Mmemme iji chọpụta ihe nlereanya nke RAM
Aha onye na-emepụta RAM na data ndị ọzọ banyere modul RAM nke arụnyere na kọmputa ahụ, nwere ike ịchọta ya site na ịmepe mkpuchi nke sistemụ PC ahụ ma na-eleba anya na kọntaktị RAM n'onwe ya. Ma nhọrọ a anaghị adabara ndị ọrụ niile. Ọ nwere ike ịchọpụta data dị mkpa na-enweghị mepee mkpuchi ahụ? O di nwute, ihe ndi ozo nke Windows 7 agaghi eme nke a. Ma, ọ dị mma, enwere mmemme ndị ọzọ nke nwere ike inye ozi na-amasị anyị. Ka anyị leba anya na algorithm iji chọpụta akara nke RAM site na iji ngwa dị iche iche.
Usoro 1: AIDA64
Otu n'ime usoro kachasị ewu ewu maka nchọpụta usoro bụ AIDA64 (nke a na-akpọbu Everest). Site n'enyemaka ya, ị nwere ike ịchọpụta ọ bụghị naanị ozi ndị na-amasị anyị, ma na-emepụta nyocha zuru ezu nke components nke kọmputa ahụ dum.
Mgbe ị malitere AIDA64, pịa na taabụ "NchNhr" nkwụsị pane na ihe "Board System".
N'akụkụ aka nri nke windo ahụ, nke bụ isi mpaghara mpaghara nke usoro ihe omume ahụ, otu ihe dị iche iche na-egosipụta n'ụdị akara ngosi. Pịa akara ngosi ahụ "SPD".
Na ngọngọ "Nkọwapụta Ngwaọrụ" A na-egosipụta RAM osisi ejikọrọ na kọmputa. Mgbe ịkọwapụtara aha otu ihe dị na windo ala, windo zuru ezu banyere ya ga-apụta. Karịsịa, na ngọngọ ahụ "Njirimara nke usoro nchekwa" n 'uzo ozo "Aha Module" emepụta ngwa ngwa na ngwa ngwaọrụ ga-egosipụta.
Usoro 2: CPU-Z
Ngwaọrụ software ọzọ nke ị nwere ike ịchọpụta aha RAM bụ CPU-Z. Ngwa a dị mfe karịa nke gara aga, ma, ọ dị mwute ikwu na ọ bụghị Russia.
Mepee CPU-Z. Bugharịa na taabụ "SPD".
A ga-emepe windo ebe anyị ga-enwe mmasị na ngọngọ ahụ "Nhọrọ Oghere Nchekwa". Pịa na ndepụta ndepụta na ntinye oghere.
Site na ndetu ndepụta, họrọ akara oghere na ngwunye RAM jikọọ, aha aha nke a ga-ekpebi.
Mgbe nke ahụ n'ọhịa "Emeputa" A na-egosipụta aha onye na-emepụta nke modul ahọrọ, n'ọhịa "Ngalaba Ntu" - ihe nlereanya ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'agbanyeghị interface CPU-Z na Bekee, omume ndị dị na usoro a iji chọpụta aha aha RAM bụ ihe dị mfe ma dị omimi.
Usoro 3: Speccy
Ngwa ọzọ iji chọpụta usoro, nke nwere ike ikpebi aha ihe nlereanya RAM, a na-akpọ Speccy.
Mee ka Speccy rụọ ọrụ. Chere ruo mgbe usoro ihe omume ahụ mere nyocha na nyocha nke sistemụ arụmọrụ, yana ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa.
Mgbe ịchisịrị nyocha ahụ, pịa aha ahụ. "RAM".
Nke a ga-emepe ozi zuru ezu banyere RAM. Ka ịlele ozi banyere otu modul na ngọngọ ahụ "SPD" Pịa na akara oghere nke ejiri njikọta ahụ.
Ozi modul ga-apụta. Ntọala ndị ọzọ "Emeputa" a ga-egosipụta aha onye ahụ ga-emepụta ya, na iche ihu oke "Ọnụ ọgụgụ" - ihe nlereanya nke ogwe RAM.
Anyị chọpụtara otú e si eji ihe omume dịgasị iche eme ihe iji chọpụta aha onye na-emepụta na ihe nlereanya nke RAM module na Windows 7. Nhọrọ nke ngwa a kapịrị ọnụ abụghị ihe na-adabere na njirimara onwe onye ahụ.